Nofoanana ny sidina rehetra, nakatona ny seranan-tsambo rehefa niomana ho any Typhoon Chanthu i Shanghai
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Nofoanana ny sidina rehetra, nakatona ny seranan-tsambo rehefa niomana ho any Typhoon Chanthu i Shanghai
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Septambra 13, 2021
Ny sidina rehetra dia hofoanana ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Pudong any Shanghai aorian'ny alatsinainy 11 maraina noho ny toetr'andro, raha ny sidina rehetra amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Hongqiao any andrefan'ny tanàna dia hofoanana ihany koa aorian'ny 3 ora tolakandro amin'io andro io ihany, hoy ny fampandrenesana nataon'ny manampahefana Shanghai Airport. Alahady alina.
Mihantona ny asan'ny kaontenera ao amin'ny seranan-tsambon'i Shanghai.
Nofoanana ny sidina rehetra tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Pudong any Shanghai.
Ny rivodoza Chanthu dia antenaina hamely an'i Shanghai amin'ny alatsinainy alina.
Tamin'ny fanambarana navoakany androany, nanambara ny Group International Port Shanghai fa niato ny asa mifandraika amin'ny kaontenera ny seranan-tsambo Shanghai, satria ny rivodoza Chanthu no antenaina hihazo ny faritra atsimon'ny tanàna ny alatsinainy alina.
Ningbo Meidong Container Terminal Co. any amin'ny faritany manodidina an'i Zhejiang dia nampiato ny asan'ny kaontenera nanomboka ny zoma teo, hoy ny orinasa tao amin'ny kaonty wechat omaly.
Nijanona nanomboka ny asabotsy tolakandro ny asan-dahalo any amin'ny seranan-tsambo lehibe ao amin'ny seranan-tsambon'i Zhoushan ao amin'ny faritany - toeram-ponenan'ireo tanky fitehirizana solika lehibe indrindra ao Shina.
Ireo fanakatonana seranan-tsambo dia mety hampihemotra kokoa ny fandefasana entana ary hanimba ny fantsom-pamokarana eran-tany, izay efa sahirana amin'ny fiatrehana ny fanondranana an-tsoratra avy any Shina sy ny vokatry ny valan'ny COVID-19 tany an-toerana.
Ary koa, ny sidina rehetra dia hofoanana any Shanghai's Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Pudong taorian'ny alatsinainy 11 maraina noho ny toetrandro, raha ny sidina rehetra mamaky ny seranam-piara-manidina Hongqiao any andrefan'ny tanàna dia hoesorina ihany koa aorian'ny 3 ora tolakandro tamin'io andro io ihany, hoy ny fanambarana nataon'ny manampahefana tao amin'ny seranam-piaramanidina Shanghai ny alin'ny alina.
Shanghai Nanambara ny governemanta fa hanidy ny akanin-jaza sy ny sekoly ambaratonga voalohany rehetra ny alatsinainy tolakandro sy talata, raha misy ny làlamby ambanin'ny tany naato ary ny valan-javaboary sy ny toeram-pizahan-tany hafa dia nakatona ny alatsinainy sy talata.
Ny faritany Zhejiang dia nanatsara ny valiny vonjimaika nataony tamin'i Chanthu tamin'ny ambaratonga avo indrindra tamin'ny alahady, ny sekoly fanidiana ary koa ny fampiatoana ny serivisy fiaramanidina sy fiarandalamby amin'ny tanàna maro, hoy ny masoivohom-baovao Xinhua. Nampiato ny serivisy haingam-pandeha haingam-pandeha ihany koa ny manampahefana ao amin'ny Delta Yangtze River.
Ny efitranon'ny USO vaovao dia manohana ireo mpikambana ao amin'ny serivisy ao Pittsburgh...
Nitifitra ny polisy nandritra ny savorovoro miady amin’ny fanakatonana tany...
Nanazava ny filankevitry ny mpanatanteraka UNWTO: Taratasy vaovao...
Ireo Londres ankehitriny dia mety hampiasa mpandraharaha fitsangatsanganana noho ny ...
Jamaika Tourism: Spa Safety and Health in New Manual
Ahoana no hanasitranana ny tsy fahitan-tory sy ny anti-tebiteby?